Cunno yareynta: nadiifinta cuntooyinka la tixgelinayo | Ragga Stylish
Jidhku wuxuu nuugaa sunta sida ugu wanaagsan ee loo nadiifiyona waa cuntada taasi waa la liqay. Cunnadu waa cunsur aad muhiim ugu ah caafimaadka, sidaa darteed waa muhiim in loo cuno cuntada nadiifinta qaab miyir leh oo mas'uuliyad leh.
Waan arki doonaa hadda liiska cuntada nadiifinta, kaas oo gacan ka geysta baabi’inta walxaha waxyeelada u geysta jirka.
Cunto maahan, laakiin Waa cabitaanka keena faa'iidooyinka caafimaad ee ugu weyn. Biyaha la cabo waxay ka shaqeeyaan jirka sida in baaldiyo lagu nadiifiyo, maadaama ay baabi'iso qashinka uusan jirku u baahnayn. Intaa waxaa dheer, biyuhu waxay sifeeyaan jirka, waxay hagaajiyaan dheefshiidka waxayna ka caawiyaan la dagaalanka laabjeexa.
Waa miraha caafimaad ee heer sare ah. Waxay nadiifisaa beerka iyo habka dheef-shiidka guud ahaan; Si aad uga faa'iideysato sifooyinkeeda nadiifinta, waxaa lagugula talinayaa inaad ku cabto casiirka biyo ku jira calool madhan. Maaddaama ay ka kooban tahay fiitamiin C-ga iyo antioxidants-ka, liinta lama khasaarin.
Hantida ugu muhiimsan ee soosaarashada caanuhu waa taas waxay ka caawisaa isu dheellitirka dhirta bakteeriyada mindhicirada. Ficilkan ku saabsan nidaamka dheef-shiidka, waxay ka caawineysaa in laga takhaluso sunta. Markaad ku socoto cuntada, waxaa lagugula talinayaa inaad cunta yogurt dabiiciga ah iyo, tan ugu muhiimsan, iyada oo aan lagu darin sonkor.
Waxaa ku jira maaddo la yiraahdo cynarin, oo kicinaysa soo saarista bile. Tani waxay ka dhigeysaa dufanka la cunay in si wanaagsan loo shaqeeyay. Waa in la ogaadaa in tani ay khuseyso dufanka la wada cuno 'artichoke'. Sidoo kale waxay hodan ku tahay fiberka iyo antioxidants.
Waxay kakoobantahay antioxidants yareeya geedi socodka dabiiciga ee gabowga. Asiidhyada dufanka leh ee ku jira avocado waxay faa'iido u leeyihiin wadnaha iyo nidaamka wareegga guud ahaan. Sidoo kale waxay hodan ku tahay fiber.
Dhammaan cuntooyinka nadiifinta waa inay la socdaan cunto dheellitiran, jimicsi jireed, qiyaastii toddobo saacadood oo hurdo ah maalintii iyo heerarka kontoroolka walwalka. Waa qaaciddada ugu fiican ee lagu ilaaliyo caafimaadka wanaagsan.
Ilaha sawirka: Dicas de Saúde /
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Nafaqeyn » Nadiifinta cuntada ee cuntadaada